တောင်ကြီး ဧပြီ - ၂၇
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း (COVID-19) ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ ဧပြီ ၂၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အလှူရှင်များမှ လာရောက်လှူဒါန်းလျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများမှ အလှူငွေကျပ် (၁၀၂.၃)သိန်းကို ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လက်ခံရယူ၍ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ရှိ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ တာလေနှင့် တာချီလိတ် ပြည်သူ့ဆေးရုံများသို့ ဧပြီ(၁၉)ရက်နံနက်ပိုင်းက COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်ကြောင်းသိရသည်။
မိုင်းဖြတ်ပြည့်ဆေးရုံ၌ Mask၊ PPE ဝတ်စုံ၊ လက်အိတ်၊ Hand Gel၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ ပိုးသတ်ဆေးမှုန့်ပုံးကြီး၊ အပူချိန်တိုင်းတာမိုမီတာ၊ လက်သန့်ဆေးရည်နှင့် တာဝန်ကျဆရာမများအတွက် ကြက်ဥ၊ ကုလားပဲ၊ ဆီ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ ဆန်နှင့် ဆေးရုံတွင် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၅)သိန်းတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဗမာတိုင်းရင်းလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများမှ ပေးအပ်ရာ ဆေးရုံရှိ ဆရာဝန်/ ဆရာမများက လက်ခံရယူကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် မိုင်းယောင်း ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ Mask၊ PPE ဝတ်စုံ၊ Hand Gel၊ လက်သန့်ဆေးရည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၅)သိန်းတို့ကိုပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိဆရာဝန်/ဆရာမများက လက်ခံရယူသည်။
ထို့နောက် တာလေနှင့် တာချီလိတ်ရှိ ခုတင်(၁၀၀)ဆံဆေးရုံများအတွက် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် Mask၊ PPE ဝတ်စုံ၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ Hand Gel၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ ပိုးသတ်ဆေးမှုန့်ပုံးကြီး၊ အပူချိန်တိုင်းတာမိုမီတာ၊ လက်သန့်ဆေးရည်တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဗမာတိုင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများက ပေးအပ်ရာ ဆရာဝန်/ဆရာမများက လက်ခံရယူကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဆေးရုံရှိ ဆရာဝန်/ဆရာမများအား အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း (COVID-19) ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ ဧပြီ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၀ က တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အလှူရှင်များမှ လာရောက်လှူဒါန်းကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲတွင် ဟေဟိန်း Co.,Ltd. ဒေါ်နန်းယဉ်မှ အလှူငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀)၊ High Land Road Construction Co., Ltd. မှ အလှူငွေကျပ် (၃၅၂)သိန်းတန်ဖိုးရှိ PPE ဝတ်စုံ (၈၀၀)ခု၊ မျက်မှန် (၈၀၀)ခု၊ N-95 (၂၀၀၀)ခုနှင့် Mask (၂၀၀၀)ခုတို့ အားပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လက်ခံရယူ၍ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မိုင်းခတ် ဧပြီ - ၁၈
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ဧပြီ(၁၈)ရက် နံနက်(၈)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် နောင်တုန်ကုမ္ပဏီမှဆောင်ရွက်နေသော ကျိုင်းတုံမြို့တွင်းလမ်းတိုးချဲ့နေမှုနှင့် မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ပြုပြင်နေမှုတို့အားကြည့်ရှုပြီး၊ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက် မှာကြား၍ ကျိုင်းတုံဒုတိယပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကိုဝင်းမှ ဆန်အိတ်(၁၀၀၀)လှူဒါန်းမှုကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိ သူများတက်ရောက်အားပေးကြသည်။
အဆိုပါလှူဒါန်းမှုတွင် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူမှပေးအပ်ရာ အာခါတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးက လက်ခံရယူကာ ကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံသို့လိုအပ်သော ဆေးဝါးပစ္စည်းများနှင့် Ventilator(၁)လုံးကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာဆေးရုံအုပ်ကြီးက လက်ခံရယူ၍ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လမ်းဦးစီးဌာနမှကာယ၊ ဉာဏဝန်ထမ်းများမှ mask(၁၀၀၀)ခုကို ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးက လက်ခံရယူပေးသည်။
ဆက်လက်၍ မိုင်းခတ်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ကိုဗစ်-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် mask၊ PPEဝတ်စုံ၊ မျက်မှန်၊ လက်အိတ်တို/ရှည်၊ အပူချိန်တိုင်းသာမိုမီတာတို့ကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့သောငွေကျပ်(၅)သိန်းကို ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးခွန်ရဲထွေးတို့မှပေးအပ်ရာ မြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး က လက်ခံရယူသည်။
ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည်မိုင်းယန်းမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကာကိုဗစ်-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးမှုန့်ပုံးကြီး(၁)ပုံး၊ mask၊ PPEဝတ်စုံ၊ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာသာမိုမီတာ၊ မျက်မှန်၊ လက်အိတ်တို/ရှည်တို့ကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှထောက်ပံ့သောငွေကျပ် (၅)သိန်းကို အာခါလူမျိုးတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးမှပေးအပ်ရာ မြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီးက လက်ခံရယူပြီး၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် မိုင်းခတ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ ဖွင့်လှစ်ထားသောစောင့်ကြည့်စခန်းမှ နေရပ်ပြန်ပြည်သူ့များအား သွားရောက်အားပေးစကားပြောကြားကာ ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ ဆန်၊ ဆီ၊ ကြက်ဥတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
လားရှိုး ဧပြီ -၁၅
ကိုဗစ်-19ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဧပြီ(၁၅)ရက် နံနက်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးခရိုင်ရှိ နမ့်ပေါင်ကျေးရွာ၌ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လမ်းညွှန်းမှုဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထု စားနပ်ရိက္ခာ ကော်မတီ(ကမ္ဘောဇဘဏ်)နှင့်ပူးပေါင်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့က ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် mask၊ PPEဝတ်စုံ၊ လက်အိတ်၊ သာမိုမီတာ၊ ပိုးသတ်ဆေးရည်၊ ဆေးဖြန်းပုံးတို့ကို ပေးအပ်ခဲ့ရာ နမ့်ပေါင် တိုက်နယ်ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူက လက်ခံရယူကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် မိုင်းရယ်မြို့သို့ရောက်ရှိ လာပြီး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် သင်္ကြန်ကာလရုံးပိတ်ရက်ရှည်အတွင်း နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့သော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန်နီ ပစ္စည်း(၅)မျိုးတို့ကိုရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ ပြည်သူများထံပေးအပ်နေမှုကို တက်ရောက်အားပေးကြသည်။
ထို့နောက်မိုင်းရယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် mask၊ PPEဝတ်စုံ၊ လက်အိတ်၊ သာမိုမီတာ၊ မျက်မှန်၊ ဆေးဖြန်းပုံး၊ ပိုးသတ်ဆေးရည်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှထောက်ပံ့ငွေကျပ် (၅)သိန်း တို့ကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ တို့မှထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာ မိုင်းရယ် မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကလက်ခံရယူ ကြောင်းသိရသည်။
၎င်းနောက်ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ဝပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောင်းလန်းရွာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၌ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ(ကမ္ဘောဇဘဏ်) နှင့်ပူးပေါင်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ကကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်mask၊ မျက်မှန်၊ လက်အိတ်၊ သာမိုမီတာ၊ HandGel၊ လက်သန့်ဆေးရည်၊ လည်ရှည်ဖိနပ် တို့ကိုပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိဆရာမကလက်ခံရယူပြီး၊ ကျေးသီးမြို့ပြည်သူ့ ဆေးရုံ၌လည်းကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်mask၊ HandGel၊ လက်အိတ်၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ သာမိုမီတာ၊ လက်သန့်ဆေးရည်၊ မျက်မှန် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှထောက်ပံ့ ငွေကျပ်(၅)သိန်းတို့ကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများတို့မှ ပေးအပ်ရာ မြို့နယ်ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြောင်းသိရသည်။
၎င်းနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ဟမ်းငိုင်းကျေးရွာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ပန်ကေတုကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတွင် ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်၍လည်းကောင်း မိုင်းကိုင်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီနှင့် အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းသော ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက ပေးအပ် လှူဒါန်းပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၅)သိန်းကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ပေးအပ်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်က လက်ခံရယူကြောင်းသိရသည်။
ယင်းနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် လဲချားမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့်မိုင်းရှူးမြိူ့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့ကိုလည်း ကိုဗစ်-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ကျိုင်းတုံ ဧပြီ - ၁၇
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နှင့်တုံတာမြို့တွင် ဧပြီ (၁၇)ညနေ့ပိုင်းက မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကိုဗစ်-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများပေးအပ်ကြောင်းသိရသည်။
မိုင်းပျဉ်းမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်mask၊ PPEဝတ်စုံ၊ Hand Gel လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတာမိုမီတာ၊ လက်သန့်ဆေးရည်၊ လည်ရှည်ဖိနပ်တို့ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများမှထောက်ပံ့ပေးအပ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ကျဆရာမများအား လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၅)သိန်းကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်ကပေးအပ်ရာ ဆေးရုံမှတာဝန်ရှိ ဆရာဝန်တစ်ဦးမှ လက်ခံရယူကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် တုံတာပြည်သူ့ဆေးရုံ၌လည်း ကိုဗစ်-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အတွက်mask၊ PPEဝတ်စုံ၊ မျက်မှန်၊ Hand Gel၊ လက်အိတ်၊ လည်ရှည်ဖိနပ်နှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်(၃)သိန်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
လားရှိုး ဧပြီ - ၁၄
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့တွင်ဧပြီ(၁၄)ရက် နံနက်ပိုင်းက နယ်မြေ(၉)ရပ်ကွက်(၁)၌ လားရှိုး ကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်အသင်း ၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလိလ်ကတို့ပူးပေါင်း၍ စားသောက်ကုန်များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာပြည်သူများအား ရောင်းချပေးနေမှုကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများမှ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်၍ လားရှိုးမြို့ ပြည်နယ်ဒုတိယအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌(COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ရှိ အလှူရှင်များ မှလှူဒါန်းပေးသည့်အခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် တက်ရောက်အမှာစကားပြောရာ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)သို့ လာရောက်ရခြင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအား အားပေးရန်အတွက် လာရောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လားရှိုးမြို့သို့လာရောက်သည့် ခရီးတစ်လျှောက်ရှိနောင်ချို၊ ကျောက်မဲ၊ သီပေါမြို့နယ်များရှိ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံများ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများကိုလည်း(COVID-19) ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒေသခံအလှူရှင်များမှလည်း လှူဒါန်းပေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။
ထို့နောက်အလှူရှင်များမှ(COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထု စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကောမတီ(ကမ္ဘောဇဘဏ်)မှ ဆန်အိတ်(၁၅၄၀)၊ ကိုးကန့်စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှVentilator (၁)ခု၊ Ever Shine Co.,Ltdမှ Patient Monitor(A)(၁)ခု၊ Patient Monitor(E)(၃)ခု၊ OXygen Cylinder (၅)ခု၊ Enterainment မိသားစုမှColumn-Type Automatic Disinfection Thermometer(၁)ခု၊ Mask(၁၆၀၀၀)ခု၊ HandGel(၂၈၀)ဗူး၊ အဖျားတိုင်းစက်(၁၀)ခု၊ Conerstone Resources MyanmarCo.ယLtdမှ GOODYပဲဆီသန့်(၅၀၀၀)လီတာ? ငွေရည်ပုလဲကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ Ventilator(၁)ခု၊ N95mask(၅၀)ခု၊ PPEဝတ်စုံ(၁၀၀)ထည်၊ အပူချိန်တိုင်းစက်(၁)ခု၊ ရှမ်းပြည် နယ်(မြောက်ပိုင်း)ပြည်နယ်ဒုတိယအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှ PPEဝတ်စုံ(၂၀၀)ထည်၊ တွဲဖက်ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(မြို့ပြ)လမ်းဦးစီးဌာနညွှန် ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ဦးကျော်ကျော်ဝင်းမှ Patient Monitor(A)(၁)ခု၊ Shinning Myanmar Co.,Ltd မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးကျော်စွာထွဋ်မှ Sodium Hypochlorite 12%(၂၀)လီတာ(၁၀၀)ပုံး အသီးသီးလှူဒါန်းပေးကြရာရှမ်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူပေးပြီး၊ ဂုဏ်ုပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည်လားရှိုးမြို့၊ အမှတ်(၃)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌ဖွင့်လှစ်ထားသော နေရပ်ပြန်(၁၄)ရက်ကြာ စောင့်ကြည့်ပြည်သူများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် သိန္နီမြို့သို့ရောက်ရှိပြီး၊ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ကောင်းအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ထောင်စု(၂၀)၊ မိုင်းယန်းကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ထောင်စု (၁၆)စုအတွက်သင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်ကာလရှည်အတွင်း အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့သောကစ္စည်း (၅)မျိုးဖြစ်သော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန်နီ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲကို တက်ရောက်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ငွေကျပ်(၅)သိန်းပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းရီမှ လက်ခံရယူ၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် အသက်ကြီးသောအခြေခံလူတန်းစား အိမ်များသို့ကိုယ်တိုင် အိမ်အရောက် ထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ သိန္နီ ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာကော်မတီနှင့် အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းပေးကြသော(COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန်PPEဝတ်စုံ၊ mask နှင့်ကွတ်ခိုင်ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင်PPEဝတ်စုံ၊ mask၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းဆေး တို့ကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးများကလှူဒါန်းပေးပြီး ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက်နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်း(၅)မျိုးဖြစ်သော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန်နီတို့ကိုရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံပေးအပ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၁၀)သိန်းကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှပေးအပ်ရာ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူး၊ ဆေးရုံအုပ်ကလက်ခံရယူကြောင်းသိ ရှိရသည်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ကွတ်မြို့မှလားရှိုးမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး၊ လားရှိုးမြို့၊ နယ်မြေ(၅)၊ ရပ်ကွက်(၁၂)နေပြည်သူများအား အခြေခံလူတန်းစားများအတွက်နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့သော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကုလားပဲတို့ကို အိမ်အရောက်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပေးအပ်နေမှုကိုတက်ရောက်အားပေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့ ရောက်ရှိလာရာ တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဇော်အေးနှင့် အဖွဲ့များကကြိုဆိုကြပြီး၊ တပ်အတွင်း (COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုအား လိုက်လံရှင်းလင်းကြကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၄)ရှိ အခြေခံလူတန်းစားများအတွက်နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့သော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန်နီ တို့ကိုရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှထောက်ပံ့ပေးအပ်နေမှုအား တက်ရောက်အားပေးကာ အာရုဏ်ဦးပရဟိတ၌အခြေခံလူတန်းစား ပြည်သူများအားထောက်ပံ့ပေးရန် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန်နီ ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ထားရှိမှုကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ခိုလမ် ဧပြီ - ၁၇
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်ခရိုင်ရှိ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ခိုလမ်မြို့ ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့နှင့် ကွန်ဟိန်း မြို့ရှိ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံများသို့ ဧပြီ(၁၇)ရက် နံနက်ပိုင်းက COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးအပ်လှူဒါန်းကြောင်းသိရသည်။
ထောက်ပံ့ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး၊ ဗမာတိုင်ရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်တို့မှ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် PPE ဝတ်စုံ၊ Mask၊ Hand Gel၊ လက်အိတ်၊ လက်သန့်ဆေးရည်တို့ကိုပေးအပ်ပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၅)သိန်းပေးအပ်ရာ ခိုလမ်ခုတင်(၁၀၀)ဆံ့ မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးမှ လက်ခံရယူကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ကွန်ဟိန်းမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် PPE ဝတ်စုံ၊ Mask၊ Hand Gel၊ လက်အိတ်၊ လက်သန့်ဆေးရည်၊ အပူချိန်တိုင်းသာမိုမီတာတို့ကို ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်က ပေးအပ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၅) သိန်းကို ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်မှ ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူ များက လက်ခံရယူကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ကွန်ဟိန်း ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ သီးသန့်လူနာဆောင် တည်ဆောက်နေမှုကို ကြည့်ရှုပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ငွေကျပ်(၃၅)သိန်းထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းနှင့် ကာလိမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် PPE ဝတ်စုံ၊ Mask၊ Hand Gel၊ လက်အိတ်၊ လက်သန့်ဆေးရည်၊ အပူချိန်တိုင်း သာမိုမီတာနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေကျပ် (၃)သိန်းတို့ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများကပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း}ရှိကျန်းမာရေးဌာနများသို့ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ(COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်
နောင်ချို ဧပြီ - ၁၃
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲခရိုင်ရှိနောင်ချိုမြို့နယ်၊ တောင်ရှည်တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကံကြီး ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ နောင်ချိုပြည်သူ့ဆေးရုံတို့သို့ ဧပြီ(၁၃)ရက် နံနက်(၁၀) နာရီက ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ (COVID-19)ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နောင်ချိုမြို့နယ်တောင်ရှည်တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် mask၊ HandGel၊ PPE ဝတ်စုံ လက်သန့်ဆေးရည်နှင့် တာဝန်ကျဆရာမများလိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်ငွေကျပ်(၅)သိန်း၊ ကံကြီး ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနတွင် maskနှင့်ငွေကျပ်(၃)သိန်း၊ နောင်ချိုပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်mask နှင့်ငွေကျပ်(၅)သိန်း၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်ရှိ နောင်ပိန်တိုက်နယ်ဆေးရုံအတွက် (COVID-19)ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် PPEဝတ်စုံ၊ mask၊ HandGel လက်သန့်ဆေးရည် နှင့်ငွေကျပ်(၅)သိန်း၊ ကျောက်မဲမြို့၊ မြို့နယ်ခန်းမတွင်ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထု စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ (ကမ္ဘောဇဘဏ်)မှကျောက်မဲမြို့အတွက်ဆန်အိတ်(၅၀၀) တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းတို့မှပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူများကအသီးသီးလက်ခံရယူကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ကျောက်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရွေ့လျားဓါတ်မှန်စက်ဝယ်ယူရန်အတွက် ငွေကျပ်သိန်း(၁၄၀)ကို ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှပေးအပ်ရာ မြို့နယ်ဆေးရုံအုပ်ကလက်ခံရယူပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည်ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ လွယ်ခေါ့ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတွင်(COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်PPEဝတ်စုံ၊ mask၊ HandGel၊ လက်သန့်ဆေးရည်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှလက်ခံရယူသည်။
ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် သီပေါမြို့နယ်၊ ဘော်ကြိုကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနသို့ သွားရောက်ပြီးCovid-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် PPEဝတ်စုံ၊ HandGel၊ လက်သန့်ဆေးရည်၊ mask နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှငွေကျပ်(၃)သိန်း တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာ တာဝန်ကျဆရာမကလက်ခံရယူပြီး သီပေါမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင် Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်PPEဝတ်စုံ၊ mask၊ HandGel၊ လက်သန့်ဆေးရည်၊ ပိုးသတ်ဖြန်းဆေး၊ လည်ရှည်ဖိနပ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၅)သိန်းတို့ ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲတွင် ဟေဟိန်း Co.,Ltd ဦးစိုင်းထွန်း၊ ဒေါ်နန်းယိင်းမှ အလှူငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀)၊ High Land Road Construction Co., Ltd. မှ အလှူငွေကျပ် (၃၅၂)သိန်းတန်ဖိုးရှိ PPE ဝတ်စုံ (၈၀၀)ခု၊ မျက်မှန် (၈၀၀)ခု၊ N-95 (၂၀၀၀)ခုနှင့် Mask (၂၀၀၀)ခုတို့ အားပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လက်ခံရယူ၍ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီသည့်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးနေမှု ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် သွားရောက်ကြည့်ရှု
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း (COVID-19) ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ ဧပြီ ၁၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ ၌ အလှူရှင်များမှ လာရောက်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ကူညီသည့်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးနေမှု ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် သွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲတွင် ဧဒင်အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်၊ DENKO Trading Co,. Ltd.နှင့် ကဉ္စနကျွန်းသာ (Gold Delta Co,. Ltd.)တို့မှ ဆန်အိတ် (၁၀၀၀)ကိုလည်းကောင်း၊ IGE Co,. Ltd. မှ COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် သိန်း (၃၂၀)တန်ဖိုးရှိ Ventilator (၂)လုံးကိုလည်းကောင်း အသီးသီးလှူဒါန်းရာ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လက်ခံရယူပြီး၊ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ကူညီသည့် ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန် ထုပ်ပိုးနေမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်းများကို ယနေ့မှစတင်၍ တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ စိန်ပန်း၊ ရွှေတောင်၊ ချမ်းမြသာစည်၊ ရတနာသီရိရပ်ကွက်ရှိ စုစုပေါင်း လူဦးရေ(၁၀၀၃)ဦးကို တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ဆန်(၈)ပြည်၊ ဆီ (၅၀)သား၊ ကုလားပဲ (၁)ပိဿာ၊ ဆား (၅၀)သား၊ ကြက်သွန်(၁)ပိဿာ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခုထောက်ပံ့မှုသည် မြေပြင်စာရင်းအရ ဖြစ်ကာ လိုအပ်သည်များရှိပါက စာရင်းပြန်လည်ပြုစု၍ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်(COVID-19) ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးမင်းထိုက်က ပြောသည်။
သစ်လုံး၊ တိုင်၊ မျောများအတွက် ကောက်ခံမည့်အခွန်နှုန်းများ သတ်မှတ်ကြေငြာခြင်း